U-Erasmus ubonga uMcCarthy ngefomu
UMGADLI weCape Town City uKermit Erasmus uthi uyakujabulela kakhulu ukusebenza nomqeqeshi uBenni McCarthy Isithombe: BACKPAGEPIX
LUNGILE MAJOKA | September 10, 2019
UMGADLI weCape Town City, uKermit Erasmus, uncoma ukusebenza nesithandwa sakhe uBenni McCarthy njengomthelela wokuthi azithole ebuyele efomini enhle esimfake naseqenjini lesizwe iBafana Bafana.
U-Erasmus useyidlale yomine imidlalo yeCity ye-Absa Premiership yakule sizini washaya amagoli amabili. Kusukela efikile kuleli qembu laseKapa eliphekwa uMcCarthy ukhombisa izimpawu zokubuyela kumdlali ayewuyena esagijima kwi-Orlando Pirates kumasizini edlule ngaphambi kokudlulela phesheya lapho afika waphikwa yizinto.
Uqale ukudlalela iCity ngoJanuwari kulandela ukusayina ngesizini edlule. Kusona leso sikhathi ukwazile ukudonsa iso lobengumqeqeshi weBafana Bafana uStuart Baxter yize egcine engamfakanga eqenjini elidlale kwi-Africa Cup of Nations ngoJuni.
UMolefi Ntseki osekunguyena othathe izintambo kwiBafana umbizile ekhempini yeBafana ebingesonto eledlule nokuyilapho * -Erasmus ebekhuluma nabezindaba.
Uthe ukujabulele ukuthi uMcCarthy ugcine engawathulonga umsebenzi wokupheka iBafana kwazise belivela nelakhe igama kwabekufanele bathathe izintambo.
“UBenni uyingxenye enkulu yempilo yami nesizathu sokujoyina kwami iCape Town City. Ngimkhonzile, uyangikhuthaza futhi ungiphonsela inselelo. Ukuba naye njengomqeqeshi yinto engiyithandayo,” kusho * -Erasmus.
Uyayivuma ifomu enhle akuyona okwamanje kodwa ukholwa wukuthi kukhulu asengakwenza.
“Kuseyi-midlalo emine kuphela yale sizini. Ngizama ukuthi nginyuse izinga njalo,” kusho yena.
Lo mdlali owake wabhala ezinkundleni zokuxhumana ukuthi yena akayena umdlali wokuchibeya ngoba ebizwe ukuzovala isikhala kwiBafana, uthe manje usekhulile ngokomqondo.
Kuzobhekwa ukuthi ahole iCity uma sekubuya imidlalo yeligi lapho izoqhuthana neSuperSport United ngoMgqibelo eMbombela Stadium ngo-8.15 ebusuku. ICity ayiyiqalanga kahle iligi, isawine kanye ishaya iStellenbosch, yadlala kabili ngokulingana neMamelodi Sundowns neBaroka, yase ishaywa yiKaizer Chiefs.